About us - Tianjin Junya Precision Imishini Co., Ltd.
Amanye Amaphayiphu Engagqwali
Engagqwali Pipe lokulinganisa
Isiphambano & Tee
Abanye Engagqwali Pipe Lokulinganisa
Kwenziwe ngentando Engagqwali Izingxenye
Ukutshalwa Kwezimali Okubunjiwe Kokusetshenziswa Kwezimali
Izinsiza kusebenza Zezingxenye
Izingxenye Zemboni Kawoyela Ongahluziwe
Ikhwalithi-Okokuqala, ubuhlakani-kuqala, insizakalo-ukuvumelana
Sinefektri yethu, etholakala esifundazweni saseHuanghua City Hebei, esihlanganisa indawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-5,000.
Tianjin Junya Precision Machinery Co. Ltd ibhizinisi Quality-ngamakhasimende, onguchwepheshe yokukhiqiza kuyehluka imikhiqizo engagqwali thusi.
Sinefektri yethu, etholakala esifundazweni saseHuanghua City Hebei, esihlanganisa indawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-5,000. Kuthatha amahora amabili kuphela ukusuka endaweni yethu yokugcina impahla ukuya echwebeni lolwandle.
Ngomugqa wokukhiqiza osezingeni eliphakeme futhi ophelele, imikhiqizo yethu ingasetshenziselwa uhla olubanzi, njengemishini yemishini, izingxenye ezisele ze-auto, i-hardware yokwakha, idivaysi yezokwelapha neyokudla, imishini yezimayini ne-ect.
Ukuhlolwa kwesigodi sezinyoka ezimhlophe
Ngempelasonto maphakathi noSepthemba, iJunya Precision Machinery Company bonke abasebenzi baya eWhite Snake Valley ukuyokwakha iqembu. Ukukhuthaza ukuxhumana phakathi kwabasebenzi benkampani nokunothisa impilo yabasebenzi, ngemuva komsebenzi onengcindezi, abasebenzi bangakhululeka ngokuphelele futhi bazivocavoce. Ithimba elincane futhi elinomdlandla labantu abangaphezu kwama-20 lihlelwe ngokuhlanganyela nguMnyango Wezokuphatha Abasebenzi, uMnyango Wezentengiso kanye noMnyango Wezindaba Omusha ukuze liye ePanshan "White Snake Valley" ukuyokhipha isakhiwo sethimba.
Kuleli bhilidi leqembu, sahlela imisebenzi yokuqwala eSigodini Esimhlophe Sezinyoka, lapho isimo sezulu sipholile futhi ubuhle bendawo buhle. Khuphuka intaba ukuziphonsela inselelo, ujabulele ubuhle bendawo, futhi uzwe umoya-mpilo wemvelo. Ngesikhathi sokukhuphuka, abasebenzi basizana futhi bakhuthazana, futhi ngemizamo yabo bonke abantu, bonke abasebenzi bawuphothula lo msebenzi wokuqwala izintaba.
Abasebenzi abajabuli kuphela ngokomzimba nangokwengqondo, kepha futhi bathuthukisa imizwa yomunye nomunye. Uma kunjalo, wonke umuntu wakhuluma ngokukhululeka futhi wakha umoya wokuzwana ohlangeneyo.
Sebenza kanzima ukuthola ukuzethemba okungcono.Bamele baqhubekele phambili babheke emaphusheni abo ngokuzimela.Isikhathi sizokunikeza konke okufunayo, Siyaqaphela futhi siyabacabangela emsebenzini ukuxazulula izinkinga zamakhasimende ethu.
Kukhuphuke phezu kwemfucumfucu
Izinto zingu-304, 304L, 316,316L, SF8M, WCB, 14408, njll.
Umhlinzeki Wemikhiqizo Engagqwali Yobungcweti
Izingxenye Zokulingwa Kwezimali, Industrial Valve, Insimbi Engagqwali 316 Ipayipi Elifanelekayo Lokulinganisa, Engagqwali Pipe nokufaka, Ukutshalwa Kwezimali Okubunjiwe Kokusetshenziswa Kwezimali, Engagqwali negesi Ball Valve,
UTianjin Junya wafika edolobheni lomlingo futhi ...
Ukuqhubeka kwamandla kagesi: UJunya wenza ...
Cha. 1004, Isikhungo saseRongqiao, Isifunda saseNankai, iTianjin City, China